Madaxweyne Gaas oo jawaab ka bixiyay go’aankii baarlamaanka Puntland (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Gaas oo jawaab ka bixiyay go’aankii baarlamaanka Puntland (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay go’aankii maanta ay xildhibaanada baarlamaanka Puntland kalsoonida ugala laabteen golihiisa wasiirada.
Madaxweyne Gaas oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegay inuu aqbalay go’aankaasi, wuxuuna go’aankaasi ku tilmaamay qodob dastuuri ah.
“Sida aad lawada socotaan waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay Talaado 18-kii July 2017, ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanadii golaha xukuumadda dowladda Puntland , taas oo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah” Sidaas waxaa yiri Madaxweyne Gaas
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay inuu xukuumad cusub kusoo dhisi doonno mudadda uu dastuurku u ogol yahay oo ah 21 maalmood, isagoo la tashanaya ku-xigeenkiisa.
“Arrintani ka madaxweyne ahaan waxay i faraysaa inaan golaha xukuumadda kusoo dhiso, muddada uu ii ogol yahay dastuurka, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland” Ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweyne Gaas.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Gaas ayaa ugu baaqay shacabka inay ka qeyb qaataan amniga dalka, iyagoo ciidamada amniga gacan ka siinaya sidii amniga loo xaqiijin lahaa.
“Waxaan ugu baaqaya shacabka reer Puntland inay ka qeyb qaataan amniga dalka, lana shaqeeyaan laamaha amniga, islamarkaana taageeraan horumarka baaxada leh ee ka socda Puntland” Ayuu hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay madaxweyne Gaas.